अपार्टमेंट को निजीकरण अपार्टमेंट (घर) मा दर्ता भएका गरिएको, कि यी नै व्यक्ति कहिल्यै आवास निजीकरण थियो प्रदान ती व्यक्ति समग्र संयुक्त नि: शुल्क स्थानान्तरण, साथै सम्पत्ति को आंशिक साधारण स्वामित्व छ। अन्य सबै क्षेत्रमा जस्तै, अपार्टमेन्ट को निजीकरण निजीकरण प्रक्रिया स्वतन्त्र वा विशेष एजेन्सीहरू को मद्दतले हुन सक्छ पूरा गर्न र बेफाइदा, छ। आत्म-प्रक्रिया मान्छे धेरै बढी बचत गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो धेरै समय लाग्नेछ। तर तपाईं अचल सम्पत्ति कम्पनीहरु को सेवा खोजी भने, निजीकरण कम समय लाग्नेछ, तर तपाईं सेवाहरूको लागि चार्ज गरिनेछ। यो अपार्टमेन्ट र बेफाइदा को निजीकरण छ।
यो प्रक्रिया सुरु गर्न सकारात्मक पक्ष मात्र देख्न सक्नुहुन्छ।:
-, बेच्न दिन, bequeath वा अन्यथा - प्रक्रिया सम्पत्ति मालिक (हरू) सम्पत्ति को मा पूर्ण समतल जान्छ पछि इच्छामा को disposed हुन सक्छ।
- एक व्यक्ति एक ऋण लिन्छ, र त्यो एक बंधक पर्छ भने त्यसपछि निजीकरण पूर्ण यो दृष्टिकोण मा फ्लैट छ। साथै, निजीकरण अपार्टमेन्ट मालिक को सहमति तेस्रो पक्ष गर्न प्रमुख हुन सक्छ।
- व्यवस्था मात्र निजीकरण अपार्टमेन्ट उत्तराधिकार वा इच्छा निर्दिष्ट छन् जो नयाँ कानुनी मालिक, को मृत्यु को मामला मा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
अपार्टमेंट को निजीकरण किन राजकुमार र व्यवसायी गर्न अनुकूल छ भन्ने छ। यसरी अपार्टमेन्ट pluses र minuses को निजीकरण - ठूलो महत्व कसैले लागि, र कसैले लायक केहि छैन को लागि।
निजीकरण बुरा विचार गर्नुहोस्:
- तपाईं निजीकरण यदि यो कम्युनल अपार्टमेन्ट वा छात्रावास कोठा, उदाहरणका लागि, राज्य एक पटक स्वामित्व थियो जसमा राज्य सम्पत्ति को निजीकरण, र त्यसपछि हालको जीवित संस्थाहरू प्रदान, त्यसपछि त्यहाँ केही बेफाइदा छन्। अचल सम्पत्ति कम्पनीहरु को मूल्यांकन यस्ता लेनदेन बजार खण्डको लगभग 20% छ। तसर्थ, छात्रावास मा खरिद र कम्युनल अपार्टमेन्ट वा कोठा को बिक्री गर्न मांग छ। यस्तो सम्पत्ति को निजीकरण भने, त्यसपछि बिक्री पहिले नै गाह्रो छ।
-, एक्लो गरिब छन् र कुनै राजकुमार भएका मान्छे, अपार्टमेंट को निजीकरण मात्र चोट। homeowners घर निजीकरण मा कर तिर्न, र भुक्तानी गर्न सस्तो छैन आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई उपयोगिता बिल, र आफ्नो बनाउन मरम्मत। जो राजकुमार छन् मान्छे, यो निजीकरण पूरा गर्न लाभप्रद छ, तर के गर्ने ती, निजीकरण हुनेछ केवल थप बोझ। विशेष को सम्झौता अन्तर्गत अपार्टमेन्ट बस्ने मानिसहरू भनेर याद सामाजिक भाडामा यी सबै घाटा देखि बचाउनुभयो छन्।
तसर्थ, फाइदा र बेफाइदा, तर एक व्यक्ति निजीकरण अपार्टमेन्ट बस्ने छ भने, यो आंशिक महंगा उपयोगिता तिर्ने देखि exempted छ छ अपार्टमेन्ट को निजीकरण, आफ्नो आवास को लागि सब्सिडी र मर्मत सुविधा प्राप्त (छत, छिंडीमा, मोहरा) बाहिर अब पूरा गर्नेछ homeowners र राज्य।
गत वर्ष याद मार्च 1 मा, माथि सार्वजनिक आवास मुक्त निजीकरण। समय भएकोले निजीकरण सिर्फ प्रचार हुँदा, मान्छे चाँडै सम्पत्ति आफ्नो घर अनुवाद गर्न, धेरै परिवर्तन भएको छ खोजे। निस्सन्देह, मानिसहरू होल्डिंग्स निजीकरण छन्, जो धेरै लेनदेन थिए, तर त्यहाँ उल्टो लेनदेन, तथाकथित धेरै थिए - आवास को डी-निजीकरण। यो सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू निर्भर - उहाँले घर निजीकरण वा गर्न चाहन्छ। तर कुनै पनि मामला मा पक्कै प्रत्येक व्यक्तिगत मालिक लागि सही समाधान भन्नेछु गर्ने योग्य वकील संग परामर्श गर्न आवश्यक छ।
2014 मा बंधक लागत को वृद्धि रुझान
एलसीडी "बाल्टिक पार्क": समीक्षा। एकाटेरिनबर्ग नयाँ
"युरोपेली" (एलसीडी), क्रास्नोडार: समीक्षा, फोटो
Mytishchi भवन माथि। Mytishchi: नयाँ अपार्टमेन्ट को लागत
जर्मन अचल सम्पत्ति मूल्य मा बढ्छ!
स्किस्टल भनेको हो? कसरी सिक्न्केल पकाउने? एक फ्राइकिङ प्यान मा पोर्क को स्नाइजल: नुस्खा
पियानो कसरी आकर्षित गर्ने: निर्देशन
बिजुली driers "अदरक": सुविधाहरू, प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन
तस्वीर Andreya Rubleva। कला प्रतीक
तीव्र Myeloblastic लेकिमिया
"रूसी मत्स्य पालन 3" को रहस्य पत्ता लगाउनुहोस्। नयाँ नौसिख्ता कसरी खेल्ने?
Immobilized एंजाइमहरु र उनको आवेदन
Semerenko स्याउ पत्ता थिए